ईन्द्रगौँडाका महिलाहरुको राम धुलाईमा परेपछी ‘माछा खान’ खोला झर्नेहरुको होस गुम ! – ebaglung.com
ईन्द्रगौँडाका महिलाहरुको राम धुलाईमा परेपछी ‘माछा खान’ खोला झर्नेहरुको होस गुम !
२०७४ श्रावण २४, मंगलवार १३:०९	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, थप समाचार, विविध
प्रेम सुनार, गुल्मी,२०७४ साउन २४ । ‘रक्सी र माछामा पैसा पनि जानु छ । रामधुलाई पनि खानु छ । उल्र्टै दुई हात जोडेर माफी गाग्नु पनि छ र लाखौं जरिवाना पनि तिर्नु छ । त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा साराका सामु बदनामीको विल्ला समेत भिर्नु छ ।’ हिजो सांझ जिल्ला प्रहरी कार्यालय भित्र भएको एक घटनाको छलफलमा सहभागी एक युवाले भने–‘धत्… यो त अति नै भयो, यस्तै हो भने हामी पनि यसरी नै फँस्न सकिन्छ अब माछा खान खोलातिर नझर्ने भईयो । ’ ती युवाहरुलाई मात्र होईन , शनिवार बडीगाड खोला लाईन तिर घुम्न गएका सदरमुकाम तम्घासका युवाहरु माथी भएको निर्घात कुटाईले ठुलो पाठ सिकाएकोछ ।
शनिवार दिउँसो तम्घासका चार जना बडीगाड खोलाईनको ईन्द्रगौंडामा विदा मनाउन र केहि विशेष काम लिएर पनि पुगेका थिए । चार जना मध्ये रेसुङ्गा नगरपालिका यमबहादुर घर्तिले ईन्द्रगौंडाकी एक महिलाको घर भित्र बसेर रक्सी सेवन मात्रै गर्नुलाई कम्जोरी उनले स्वीकारे पनि अरु तिन जना रामबहादुर कुँवर , बाबुलाल पन्थी र मिनबहादुर रावत निर्दोष हुँदाहुँदै पनि स्थायिन महिलाहरुबाट निर्घात कुटिएको बताईएको छ ।
चिने जानेको हुँदा घर्ति भित्र बसेर रक्सी सेवन गरेको अरु तिन जना मध्ये दुई जना उनिहरुलाई छाडेर हिडेको र एक जना ढोका बाहिर बसेको स्थानियले बताए । बाहिर ढोकामा बस्नेले स्थानिय केहि महिलाहरु ती महिलाको घर भित्र हेर्न जान्छौं भन्दा नदिएको बताईन्छ । उनलाई गार्डको सज्ञा दिदै रातौरात स्थानिय युवा र महिलाहरु जुटेर घेराउ गर्न थाले पछि बाहिर गएका दुई जनालाई बोलाएर उनिहरु त्यहाँबाट हिडेका थिए । रातभरी उनिहरुको चियो गरेर बसेका स्थानियको आक्रोशलाई नबुझी बिहान त्यसै ठाउँमा उनिहरु पुग्नु नै ठुलो दुर्घटना भोग्न उनिहरुले परेको बुद्धिजिवीहरुको बुझाई छ ।
घर्तीको महिला प्रति गलत नियत नभएको मदिरा सेवनको बेला आवेशमा बढि कुरा बोलेको प्रति उनले माफी मागेको तर ईन्द्रगौडाका आक्रोषित महिलाहरुले कुट्न नछाडेको प्रत्यक्षदर्शीले बताए । ‘उनिहरुलाई हामी पुरुषले नजोगाएको भए झन ठुलो दुर्घटना हुने थियो , ईन्द्रगौंडका एक व्यवसायीले भने– ‘यहाँ सम्मकी सडकमा लडाएर कट्टु समेत थुतिदै थियो , मैले माथी सारी दिएको हुँ । ’ आईतवार साँझ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याईएका उनिहरुको कसैको आँखामा त कसैको शरीरका विभिन्न भागमा चोट थियो ।
त्यसरी महिलाहरु आक्रोषित हुनुको पर्दा भित्रको रहस्य बाहिर नआए पनि खुल्ला सडकमा भएको महिला आक्रमणले हद नाघेको कुटाई खाने पक्षले टिप्पणी गरे पनि उताको महिला पक्षले आगमी दिनमा अरु पनि महिलालाई ‘माछा नठानुन’ भन्नका लागि गतिलो पाठ सिकाएको बताउँछन् । ईन्द्रगौडाकी अगुवा महिला ललिता सुर्यबंशीले ज्यान हत्केलामा राखेर कसैले पैसा कमाएको छ भने त्यसको पाप एक दिन अवस्य धुरीबाट कुर्लिने प्रतिकृया दिईन् । ‘किन एक्ली महिलाको घरमा रातीमा रक्सी खान जानु परेको थियो रु ईन्द्रगौडाकी अर्की महिला अगुवा मैना बिकले भनिन , रक्सी खाए पनि ती महिलालाई धम्काउने र उनका छोरा छोरीलाई गाडीमा हालेर लैजान खोजेका कारण आफुहरु आक्रोषित हुनु परेको हो । ’
स्थानिय युवाहरुले यो कुटपिट काण्डलाई रामधुलाईको सज्ञा दिदै खोला लाईनमा माछा खान आउने नाममा कुनै महिलाहरुलाई गिद्देदृष्टि लगाउनेहरुलाई यो गतिलो पाठ भएको प्रतिकृया दिएका छन् । स्थानिय महिलाहरु सुर्यबंशी र बिकका अनुसार कुटपिट खानेहरुले दुई लाख नगद जरिवाना र माफी मगाए पछि हिजो साँझ ८ बजे मेलमिलाप गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुद्धाफाँटका प्रहरी सहायक निरीक्षक सत्यनारायण यादवले भने नगद जरिवानाको विषय आफुहरुलाई थाह नहुने बताए । उनिहरु दुबै पक्ष बाहिरबाट मिलेर आए पछि मात्र आफुहरुले मिलापत्रको कागज गरिएको यादवको भनाई छ । निर्घात कुटिएको उनिहरु एक रात भरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा समेत रहनु परेको थियो ।
विदाको दिन प्राय धेरै जसो युवाहरु खोला लाईन अर्थात छल्दीको रातचौर, रातडाँडा र बडीगाड खोला किनारमा भएको होटलहरुमा माछा खान झरेको भन्दै जाने गर्दै आएका छन् । खोलाको माछा संगै कोड भाषामा अर्को ‘माछा ’ स्त्रीगमन भन्ने गरिन्छ । यो घटना संगै कुनै समय ‘माछा मारन हो दाई हो रक्सीलाई चटनी, माछा मारन !’ बोलको पुरानो गीत गाएर त्यस भेगमा झुम्न जानेहरुले अब यस्तो प्यारोडी गाउनु पर्ने भएको छ कि – खोला नझर हो दाई हो , रक्सीलाई चटनी माछा नमार…!
बागलुङमा गाईजात्रा पर्व : आज देखी कृष्णाष्टमी सम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईदै
प्रवास : जापानको कोबेमा गोर्खाबाट पढ्न आएका एक नेपालीको मृत्यु